VIDEO: Taliska ciidanka oo markii ugu horaysay ka hadlay gabar si xun loogu diley Bosaso
October 26, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 1
Taliska ciidanka ammaanka gobolka Bari ayaa markii ugu horraysay ka hadlay dhacdo xanuun badan oo ka dhacday xaafadda Raf iyo Raaxo ee magaala madaxda ganacsiga Puntland ee Boosaaso.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa booqday cisbitalka weyn ee Boosaaso oo uu yaal meydka gabar yar oo si xun loogu diley gudaha Boosaaso kadibna meydkeeda meel la soo dhigay.
Taliyaha ayaa warbaahinta u sheegay in takhaatiirta cisbitalku ay xaqiijiyeen inuusan jirin wax kufsi ah oo loo geystey gabadhaasi yar ayna dhacdadu ku kooban tahay dil oo kali ah sida ay sheegeen.
Gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa ku amray dhamaan laamaha ammaanka iyo hay’adaha baarista dambiyada inay sida ugu dhaqsaha badan xogo dheeri ah uga keenaan gacantana ku soo dhigaan ciddii ka dambaysay falkaasi foosha xun.
sanooyinkii la soo dhaafay waxaa wadama Badan ee africa ka dhacayey ficilo noocaan oo kale ah oo dhalaanka lagu ugaarsanayo. ugaarsigaas ok ay fulinayaan ururo kala duwan. ururodaas waxay ahaayeen kuwa xubnaha ka ganacsada, qaarka kalena waxay u badnaayeen kuwa jinka caabuda iyo kuwa sixirka adeegsada.
si ay jinka ula saaxiibaan waa in ay fuliyaan ficilo rabi ka fogaansho fog leh.
Puntland iyo Galmudug oo hanjabaado kaga dhawaaqay Galkacyo xilli diyaar garaw ciidan ka socdo.